Golaha ammaanka Q.M oo walaac ka muujisay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Golaha ammaanka Q.M oo walaac ka muujisay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya
Golaha ammaanka Q.M oo walaac ka muujisay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya
Muqdisho (Walwaal.com)- Golaha ammaanka Qaramada midoobey ayaa ugu baaqay dhamaan Hogaamiyaasha Somalida inay xal ka gaaraan dhibaatada wali ku gidaaman Doorashada Somalia.
Safiirka Mareykanka ee QM Linda Thomas Greenfield ayaa saxaafada u sheegtay kadib markii usoo idlaaday kulan albaabada u xirnaa ee fogaan arag ah 15 xubnood ee Golaha amaanka in Golaha walaac xoogan uu ka muujinayo in hogaamiyaasha Somalida ayyan wali xal kaagarin khilaafadka doorashada Somalia.
Waxa ay Linda Thomas Greenfield carabowday in si sharuud la’aan ah ay madaxda Somalida miiska wada hadalka iskugu tagaan ayna xaliyaan qadiyaha wali la isku haayo.
Hase ahaatee, war saxaafadeed wadajir ah oo Puntland iyo Jubaland ay soo saareen ayay ku sheegeen in mas’uuliyiinta dowladda dhexe “ay xagal daacinayaan” shirkii loo ballan sanaa inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho.
Previous articleCabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay muranka ka taagan doorashada iyo qodobada la isku hayo
Next articleMaxay ka wadahadleen Taliye Odawaa iyo saraakiil ka socoto Midowga Yurub